Board Board PCBA
Mahery ny fahafaha-mamokatra
High azo itokisana Testing
Top kalitao ambony indrindra
Kalitao momba ny kalitao
Afaka hihaona daholo ny zavatra ilaina nitranga fahiny, indrindra fa amin'ny mpanjifa elektronika, instrumentation fanaraha-maso sy ny fitaovana ara-pitsaboana. Ny tena voaofana injeniera, ary ho azo antoka mpandraharaha mahay famolavolana famaritana conformance in production.Creat Ad ...
Mampiasa ny mpamatsy isika mba hahazoana continous fampihenana ny fandaniana, ankoatra ny fanaovana CREAT mifaninana avy amin'ny tolotra voalohany. milalao amin'ny faritra tombony any Shina, mavitrika hampivelatra ny asa eny ifotony, manampy ny mpanjifa hisafidy singa amin'ny ...
Creat dia fanompoana manontolo fifanarahana orinasa mpamokatra entana elektronika orinasa izay manome vahaolana feno ho an'ny faritra Natonta Board Fivoriambe. Ianao hifantoka amin'ny fototry ny raharaham-barotra. Tsy mifantoka amin'ny fampihenana ny vola lany, ny vokatra haingana hivarotra sy ...
Naorina tamin'ny 2004
Ny tantara tsy manam-paharoa no nanampy anay ho tonga ny zavatra isika amin'izao fotoana izao. Efa raiki-tampisaka ao amintsika, dia mifantoka amin'ny teknolojia, ny fitiavana ho an'ny fanatsarana mitohy sy ny kolontsaina mifototra amin'ny soatoavina sy ny fanomezana hery ny olona.
2013 , nametraka ny hetsika in Dongguan afovoan-tanàna, manetsika ny varotra ivelany, fividianana, R & D, sampan-draharaha ara-bola ho Dongguan.
2010 , nametraka ny Creat Elektronika Group Co., Ltd. in HK. Ampitomboy ny R & D fanompoana sy ny asa eny ifotony, nanomboka hanitatra ampitan-dranomasina tsena.
2004 , nametraka ny SMT Jasya orinasa ao Shenzhen. Ny tena raharaham-barotra ao an-toerana dia Antenimieram-PCB fanompoana.
Fijanonana iray service
PCB & PCBA fanamboarana
Electronic vokatra mpanolo-tsaina
Orinasa: Mamorona Electronic Group Co., Ltd
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
Medical Fitaovana Pcbpcba , Medical Control Pcba Assembly , Medical fitaovana Multilayer PCB , Industrial Control Pcba , Hitany Power Board Pcba Control , tsaina Alarm Pcba ,